Torohevitra sy karazana famokarana horonantsary mpanazava | Martech Zone
Alakamisy, Aogositra 20, 2015 Talata, Oktobra 6, 2015 Douglas Karr
Eo afovoan'ny iray hafa isika famokarana horonantsary manazava rehefa manoratra an'ity aho ary nahita valiny mahavariana avy amin'ny horonan-tsary efa novokarinay, na nasianay an-tsoratra na nozarainay. Ity dia infographic iray tena miavaka amin'ny famoronana horonantsary manazava izay manome dingana matanjaka amin'ny famoronana horonantsary izay mitondra fifandonana sy fiovam-po.
Noho izany, ahoana no fomba hamoronana horonan-tsary manazava izay hampiakatra ny taham-panovana anao? Mba hanampiana anao, namorona infographic aho izay manapotika ny fizotry ny famoronana horonantsary manazava tonga lafatra. Neil Patel, Quicksprout.
Nozarainay ny horonantsary manazava amin'ny horonantsary manazava Mety ho tianao ny hijery. Ary nizara vitsivitsy ihany izahay ohatra amin'ny horonantsary manazava, na dia manana bebe kokoa aza ity infographic avy amin'ny Quicksprout ity!
Raha te hahita toro-lalana hafa ianao Famokarana horonantsary Explainer, zahao ny McCoy Productions Torolàlana momba ny famokarana horonantsary Explainer.
Ny hany fanatsarana nataoko tamin'ity sary ity dia ny famokarana horonantsary manazava dingana voafaritra. Dingana 2 no script ary ny dingana 3 dia storyboarding ny video an-doha. Tsy miombon-kevitra aho… ary manizingizina aho fa hamoaka sary masiaka isaky ny seho miaraka amin'ilay script mifanaraka aminy, avy eo apetraka eo amin'ny rindrina na latabatra, manome sary mazava kokoa ny amin'ny fahatsorana sy ny hafainganan'ny horonantsary manazava. Ny mpamorona horonan-tsary rehetra niara-niasa taminay dia namatsy an'io ary nitahiry ny taonan'ny famokarana.
Raha tsy maintsy niroso sy niverimberina tamin'ilay horonantsary novolavolaina isika, dia mety nanary fotoana fotsiny taminà sary mihetsika izay tsy tokony hampiasaina, na tsy nahitana famokarana seho mila ampiana. Tahaka ny fanesoesoana amin'ny fampiharana iray no ahafahana mamonjy fotoana fampandrosoana, ny esoeso amin'ny sehatra dia hamonjy anao ezaka be dia be amin'ny famokarana horonantsary manazava anao.
Tags: mamorona horonantsary manazavahoronantsary mpanazavafamokarana horonantsary manazava